भारतीय प्रतिनिधिसँगको वार्तामा चुच्चे नक्सा टेबलमुनि राखेर ओलीले नक्कली राष्ट्रवाद देखाए : नेता पाण्डे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पुस १४, २०७७ प्रतीक्षा काफ्ले
गण्डकी — नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्कली राष्ट्रवाद देखाएको बताएका छन् । उनले भारतीय प्रतिनिधिसँगको वार्तामा चुच्‍चे नक्सा टेबलमुनि राखेर ओलीले नक्कली राष्ट्रवाद देखाएको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पोखरामा मंगलबार नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहको विरोध प्रर्दशनमा बोल्दै नेता पाण्डेले भारतको उक्साहटमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको आरोप लगाए ।
नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले मंगलबार पोखरामा निकालेको विरोध प्रदर्शन । तस्बिरः प्रतीक्षा काफ्ले/कान्तिपुर ।
उनले भने,‘भारतको प्रतिनिधि भ्रमण आउँदा चुच्चे नक्सा टेबलमुनि राखेर पुरानै नक्सा देखाएर वार्ता गर्ने र जनतामा आएर चुच्चे नक्सा देखाउँदै भ्रम छर्ने गरेका छन् ।’ नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भन्दा ठूलो दर्भाग्य व्यहोनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै यसविरुद्ध गरिएको आन्दोलन नेताको लागि नभई जनताको लागि भएको नेता पाण्डेको भनाइ थियो ।
उनले पार्टीमा दाहाल–नेपाल समूहको बहुमत भएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रम ओलीलाई कोरोनाले थिल्थिलाएको देशलाई प्रतिगामी कदम चालेर द्वन्द्वमा घचेट्न लागेको आरोप लगाए । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच एकता गर्ने क्रममा भएका सम्झौतालाई प्रम ओलीले कार्यान्वयन गर्न नखोज्दा अहिले यो अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ओलीलाई अरुबाट परिचालित गरिएको बताउँदै नेता पाण्डेले संविधानमाथि बलात्कार भएको बताएका थिए ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७७ १५:४३
काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निरंकुश बाटो समातेका केपी ओली एण्ड प्रवृत्तिको आयु पुगेको बताएका छन् । संसद् विघटनविरुद्धमा नेकपा (दाहाल-नेपाल) पक्षले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले निरंकुश केपी ओली एण्ड प्रवृत्तिको अन्त्य भएको बताएका हुन् । ओलीले जनताले बनाएको संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नेपालको टिप्पणी थियो ।
ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा आउँदापञ्चायतविरुद्धको बुटवलमा भएको संघर्ष सम्झना आएको उनले बताए । ‘निरंकुश केपी ओली एण्ड प्रवृत्तिको आयु पुग्यो । पुस ५ गतेका दिन वामपन्थी भनिएका नेताले संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । के त्यो राजनीतिक, संवैधानिक हिसाबले उचित छ ? हाम्रो आन्दोलनको चाहना अनुरुप छ ? जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि त्यो निर्णय अनुपयुक्त छ । असंवैधानिक कदमलाई अस्वीकार गर्छौं,’ नेपालले भने ।
अध्यक्ष नेपालले ओली गणतन्त्रविरोधि भएको भन्दै यो व्यवस्थाप्रति उनलाई माया नभएको बताए । ‘कसरी ओलीले आन्दोलनको सन्दर्भ, गणतन्त्रको आन्दोलनका खिसिट्युरी गरेका थिए । उहाँले भन्नु भएको थियो वयलगाढा चढेर वासिङ्टन पुग्न सकिँदैन । महामहिम केपी ओलीले बोल्नु भएको थियो । त्यसकारण उहाँलाई गणतन्त्रप्रति माया छैन । परिवर्तनपछि माया छैन,’ नेपालले भने, ‘यो व्यवस्थाप्रति माया छैन । संघीयताविरुद्ध, संविधानविरुद्ध, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताविरुद्ध एकपछि अर्को कदम चाल्नु भएको छ । त्यसकारण जनता सडकमा उत्रेका छन् । नेकपामात्रै होइन अन्य दल पनि सडकमा उत्रेका छन् । २२ दलीय वामपन्थी मोर्चा पनि सडकमा उत्रेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमप्रति मेचीदेखि महाकालीबाट पनि विरोध भएको नेपालले बताए । ‘समाजका सबै वर्ग, नागरिक समाज, पत्रकारदेखि सबैले प्रतिगामी कदम हो, यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन । देशमा अस्थिरता निम्त्याउने छ । जनताको सुखका दिनहरु हामीले ल्याउन पाउने छैनौं भन्ने चिन्ता जाहेर गरेका छन् । त्यही कारण हामी सडकमा आएका हौं,’ नेपालले भने ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७७ १५:३६